Elibenze zomlilo, Gas Generator, ayaphola zomlilo - Yinuo
ton Enye ziko nzini zokufudumeza gas eziko
Izinto eziluncedo: High ukusebenza yokutsha, ekujoliswe amadlozi ukufikelela ukufikelela imigangatho yesizwe yokusingqongileyo; ulawulo lobushushu ngokuzenzekelayo ngokupheleleyo, ulawulo ubushushu ngendlela phezulu; Ngaba ugcine irekhodi lobushushu, uxinzelelo kunye alarm ngaphezu kwenyanga enye. ukhuseleko factor High, kunye neentlobo ngeentlobo iirekhodi tyala alarm; A Inani elincinane nemilomo, iindleko zolondolozo phantsi. Into eyenzeka kweli bali: ukhuselo lokusingqongileyo kunye namandla osindisayo, iqondo eliphezulu esizisebenzelayo, kahle eliphezulu, ekhuselekileyo kunye oluthembekileyo. Yethu Inkampani? ...
ukuhamba Industrial beam eziko Customer -...
China Factory OEM ehamba umqadi ayaphola eziko
Iziko Uhlobo Hot Air ajikelezayo Heat Unyango ...
1) Iziko lesinyithi Nethemba Feature Ukuze ngokukhawuleza shushu iziko, ingenguye ukusetyenziswa kwamandla, nokulawula ngobunono, uphahla, kwicala kunye nodonga umva lining isebenzisa ifayibha ngokupheleleyo structure.To ukwandisa amandla yesakhelo eziko, apha ezantsi ziko kunye namalungu bogie izitena kophethe ukwakha kunye kwimicu ezingatshiyo. Isakhiwo ezi mpawu zilandelayo: A. ubunzima Light, ngaphantsi yokugcina ubushushu yokugquma B. Good, udonga lomlilo esezantsi-lobushushu (umphezulu ecaleni ezikweni lobushushu liphuma o ...
Protection Environmental and Technology Co., Ltd. ise ubuhle bendawo omhle Xuzhou sixeko. Jiangsu kwiphondo eliphezulu ubugcisa obutsha zone kuphuhliso lwezamazhishini, le mveliso kuthatha indawo engaphezulu kwe 70000 square metres, ukwakha indawo melers ngaphezu 50000 isikwere, ii-asethi ezisisigxina 100 million yuan, kunye nolawulo, zobungcali lechnical kunye nokwakhiwa ukuwelda abasebenzi quality ngaphezu nabantu abangama-400. efektri yethu unamandla zobugcisa ezintsha womelele kwaye palents ngaphezulu kwe 10 imodeli eluncedo kunye nobuchwepheshe fyabo njl
Zeziphi iindlela eziqhelekileyo zokufudumeza amaziko okufudumeza ngokutsha
Isithando somlilo esivuselelayo ngokubanzi siqulathe la macandelo alandelayo: ngaphakathi eziko, isoftware yenkqubo yezinto, isoftware yenkqubo yokungenisa umoya, inkqubo yokuthintela umsi, kunye nenkqubo yefriji. Ukubuyiswa kobushushu benkunkuma kunye nesixhobo sokusetyenziswa, njl njl.
Yintoni ekufuneka ihlawulwe ekusebenzeni kwesinyibiliko sokufudumeza isinyithi?
Yeyiphi imixholo ethile ekufuneka uyiqwalasele xa usebenzisa isithsaba sisitya sokufudumeza? Ngaba abantu abaninzi bahlala besebenzisa isithando sokufudumeza isinyithi? Ukuze uthintele ngcono abantu abaninzi ukuba benze iimpazamo kwinkqubo yokusebenza, abantu abaninzi kufuneka balumke Funda eli nqaku, e ...
ring zomlilo, Natural Gas Aasa , Industrial Electric Aasa , Continuous Annealing Furnace, Two Stage Coal Gasifier , Steel Hardening Furnace,